महान खुशीको खबरले
जोन पाइपरद्वारा ख्रीष्टमसका २५ अध्ययनहरू
येशूले ख्रीष्टमसको लागि के चाहनुहुन्छ ?
आनन्दपूर्ण मनन र उत्कट आशाले ख्रीष्टमसको समय भरिएको हुन्छ, जसै संसारभरिका ख्रीष्टियानहरूले आफ्नो मुक्तिदाताको आगमनको उत्सव मनाउँदछन् । महान आनन्दको खुशीको खबरमा, जोन पाइपरले ख्रीष्टमसको समयमा येशूमा आफ्नो ह्रदयलाई ध्यान केन्द्रित गर्न पाठकवर्गहरूलाई आमन्त्रित गर्दछन् ।
“महान खुशीको खबरले हामीकहाँ ख्रीष्टमसको महिमाको ताजकिपना ल्याउँदछ । व्यस्त मानिसहरूको (…) लागि हाम्रो मुक्तिदाता येशुको बारेमा [हरेक दिन] सोच्नु, र आराम गर्न पाउनु, आनन्द मनाउनु, जागृत हुन पाउनु कति खुशीको कुरा हो ! ” (रे ओर्टलून्ड)
येशूको बारेमा सत्यताको एक खजाना बाकस !
यी २५ दैनिक अध्ययनहरू प्रत्येकले एउटा बाइबलको खण्डलाई र एक छोटो मननलाई जोर दिदछ । व्यक्तिगत अध्ययन र पारिवारिक आराधनाको लागि एकदम उपयोगी यी दैनिक अध्ययनहरू येशू ख्रीष्टको जन्मद्वारा हुने मुक्तिको प्रतिज्ञाको भव्यताबारे चिन्तन-मनन गर्ने महान तरिका हुन् ।
क्रिसमसको आनन्द बाँड्नुहोस्
© 2021 Gospel Publication & Himilayan Translation Network, Nepal